Ubuyisa ithemba ngengoma uMtee
UNETHEMBA lokuthi ingoma yakhe entsha ethi iThemba izobuyisa ithemba kwabaningi ikakhulukazi entsheni ebhekene nezingqinamba ezihlukene u-Emtee, athi kuningi abalandeli bakhe abazokujabulela kwi-albhamu yakhe entsha ezophuma ngenyanga ezayo ISITHOMBE; SITHUNYELWE
Nokubongwa Phenyane | February 3, 2021
UMCULI wakuleli obese kunesikhathi engakhiphi ngoma uMtee, useveze ukuthi ingoma yakhe entsha ethi iThemba, akangabazi ukuthi lukhona ushintsho ezolwenza entsheni yakuleli.
Le ngoma ayikhiphe ngeledlule, uthi ukuphuma kwayo kuzolandelwa i-albhamu yakhe ethi Logan, ezophuma ngoMashi.
Lo mculi oke waba sezinkingeni nesitebele adume engaphansi kwaso i-Ambitious Entertainment, uveze ukuthi yena uyisibonelo sokuthi uma unethemba konke kungaphinde kulunge.
“Noma ubani obona isimo sakhe singahambi kahle akabukele kumina njengoba ithemba ngingalilahlanga izinto zibheda. Kuyimanje sibhekene nobhubhane lwegciwane iCovd-19, nalapho asibe nethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzolunga. Intsha ilahlekelwa imisebenzi, imindeni ilahlekelwa imizi ehlala kuyona nabathandiweyo bethu, isimo senhlupheko kunokuthi sibe ngcono siba sibi kakhulu, siyesaba ngendlela okwenzeka ngayo, kodwa ngithi ithemba singalilahli,” kusho uMtee.
Uthe abantu kuningi abazokujabulela kwi-albhamu yakhe ezayo ayiqambe ngendodana yakhe encane uLogan.
“Kuyangijabulisa kakhulu ukuba ubaba, ngakho namadodana ami ngifuna akhule ebukela kumina ukuthi ukuba nobaba empilweni kuyinto ejabulisa kanjani. Ngizama ngayo yonke indlela ukuthi amadodana ami ngiwafake kusemanje kulo mkhakha engikuwona. Okunye engifuna ukukwenza njengoba ngiwakhombisa umsebenzi wami ukuthi akhule ezibonela ukuthi ngisebenza kanjani futhi iziphi izingqinamba engike ngabhekana nazo emculweni, angezwa ngabantu,” kuchaza uMtee.
Uthe indodana yakhe uLogan ifike emhlabeni la izinto zingamhambeli kahle khona, kodwa ubazi ukuthi uNkulunkulu akamlahlile.